कसरी जेल ब्रेक बिना आईफोन कल रेकर्ड गर्न आईफोन समाचार
जेलब्रेक बिना कसरी आईफोन कल रेकर्ड गर्न
हामी भएको देशमा निर्भर गर्दै, फोन कल रेकर्डिंग कानूनी वा अवैध हो। यो हामी किन गर्न सक्दैनौं भन्ने कारणहरू मध्ये एक हुन सक्छ आईफोनको साथ कलहरू रेकर्ड गर्नुहोस्, वा कम से कम त्यहाँ कार्य गर्न को लागी कुनै बटन छैन। केहि समय अगाडि म एक विकासकर्ताको अनुसरण गर्दै थिएँ जसले आईफोनमा कलहरू रेकर्ड गर्न चिमटा बनाइरहेका थिए र धेरै वकिलहरूसँग कुरा गर्नुपर्दा अन्ततः ध्वनी चेतावनी थप गर्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो कि अर्को पक्षले थाहा पायो कि कल रेकर्ड हुन गइरहेको छ।
यो जस्तो केसमा सामान्य कुरा यो लाग्छ कि यो हाम्रो आईफोन जेलब्रेक गर्न आवश्यक छ, तर होईन, यो त्यस्तो छैन। त्यहाँ एक आईफोनमा कल रेकर्ड गर्न को लागी एक तरीका छ कुनै ब्रेक छैन तर, मैले माथि भनें, त्यहाँ त्यहाँ कुनै बटन छैन र यसलाई गर्ने कुनै सहज मार्ग छैन। यो बाइपासको रूपमा गर्ने बारे हो, जबकि मलाई एप्पलको फिक्सिंगको कुनै इरादा छैन र त्यसले जानाजानी यसलाई थपेको पनि महसुस गर्छु। यहाँ हामी तपाईंलाई पछ्याउने प्रक्रिया देखाउछौं।
आईफोनमा कल कसरी रेकर्ड गर्ने
सबै भन्दा पहिले, हामीले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि हाम्रो अपरेटरले हामीलाई आईफोनको भ्वाइस भ्वाइसमेल प्रयोग गर्न अनुमति दिँदछ। यदि हामी टेलिफोन अनुप्रयोगबाट «मेलबक्स» बटनमा ट्याप गर्दछौं र हामी देख्छौं कि यसले हामीलाई विकल्प दिदैन, यो विधि हाम्रो लागि काम गर्दैन। यदि हामीसँग यो सक्रिय छ भने, हामी निम्न चरणहरू पूरा गर्नेछौं:
हामीले कल गर्यौं।
हामी विकल्पमा छुन्छौं call कल कल »।
हामीले हाम्रो फोन नम्बर डायल गर्‍यौं। यसले हाम्रो मेलबक्समा कल पठाउनेछ।
जब कल हाम्रो मेलबक्समा रेकर्ड हुन शुरू हुन्छ, हामी "ज्वाइन्ट कल" विकल्पमा ट्याप गर्दछौं, जसले चरण २ मा गरेको कललाई चरण in मा गरेकोमा सामेल हुनेछ र सम्पूर्ण कुराकानी रेकर्ड गर्दछ।
कुराकानी सुन्न सक्षम हुन, हामीले केवल टेलिफोन अनुप्रयोगको "मेलबक्स" सेक्सन प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
मैले पहिले भनेझैं, तपाईंले कल रेकर्ड गर्दा सावधान हुनुपर्छ किनकि यो कानुनी नहुन सक्छ। सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको कम्पनीहरूले जस्तै फोनमा केहि बेच्ने गर्दछ: हामीलाई सूचित गर्नुहोस् कि हामी रेकर्ड गर्न गइरहेका छौं, र यदि उनीहरूले हामीलाई भने कि तिनीहरू सहमत छन्, उत्तम भन्दा उत्तम। के तपाईंले कुनै कलहरू रेकर्ड गर्न व्यवस्थित गर्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » जेलब्रेक बिना कसरी आईफोन कल रेकर्ड गर्न
मलाई आश्चर्य छ, भ्वाइस मेलको रूपमा, के कलले तपाईंको पैसा खर्च गर्दछ? मैले बुझें कि तपाईंले कल गरेको कसैको मेलबक्समा सन्देश छोड्दा पैसा खर्च हुन्छ, यही कारणले जब धेरैजना रोकिन्छन् जब उनीहरू रोबोट महिलाले सन्देश छोड्छन् भनेर सुन्छन्।
नमस्ते जेस्स। यो कम्पनीमा निर्भर गर्दछ, तर सम्भवतः हो। जे भए पनि, कल रेकर्डिंग महत्त्वपूर्ण कुराको लागि हुनुपर्छ।
र के हुन्छ यदि कल गर्नुको सट्टा, उनीहरूले मलाई बोलाउँदछ, विधिले काम गर्दछ?
डेभिड काफकु भन्यो
नमस्कार, प्रश्न छ, के यसले कलको बेला घर थिचेर र भ्वाईस नोट्स अनुप्रयोग खोलेर र सिधा रेकर्ड गरेर काम गर्दछ?
अभिवादन, यसले पहिले मेरो सेवा गर्‍यो, मलाई थाहा छैन यदि यसले सेवा जारी राख्नेछ भने ...
डेभिड काफकुलाई जवाफ दिनुहोस्
एलेक्स Latorre भन्यो
मैले "ट्रिक" बुझें र यो स्पष्ट रूपमा तपाइँको कम्पनीमा निर्भर गर्दछ। मलाई कुन कुराले दिक्क लाग्यो कि एप्पलले जानाजानी यसलाई थप्यो वा यसलाई हटाउने कुनै अभिप्राय छैन।
मेरो साथी, तपाईले जे प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसलाई कन्फरेन्स कल भनिन्छ र यो तपाईको टेलिमार्केटरले प्रस्ताव गरेको सेवा हो। यहाँ एप्पल न त प्रवेश गर्छ र न छोड्दछ, वास्तवमा तपाईं यसलाई कुनै टर्मिनलसँग गर्न सक्नुहुनेछ जुन मल्टिका-कन्फरेन्सिंगलाई समर्थन गर्दछ… नोकिया 3310 XNUMX१० 🙂
एलेक्स Latorre लाई जवाफ दिनुहोस्
.Uenti अनुप्रयोगबाट तपाईं अनुप्रयोगबाट कल गर्न र कल रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईंको कम्पनी को लागी, tuenti वा vozip कल
@Diego_nrg लाई जवाफ दिनुहोस्
एफबीआई ले एप्पल लाई आईओएस र ओएस एक्स भेद्यताको बारेमा पहिलो जानकारी प्रकट गर्दछ
एप्पल पे को उपयोग केवल एक वर्ष मा by ले गुणा गर्दछ